Falanqeynta kulanka xiisaha leh ee Manchester United iyo Aston Villa
bishops condemn insurgents’ offensives
48 died in Darfur at some point of demolition
Tunisia dangers dropping frozen property
Milatariga Mareykanka “si buuxda” ayuu uga baxay
Manchester United ayaa fursad u heysata inay barbardhigto dhibcaha kooxda hogaanka u heysa Premier League ee Liverpool hadii ay Old Trafford ku garaacaan kooxda Aston Villa oo xilli ciyaareedka ku guuleysatay.
Athletic Bilbao ayaa ku guuleysatay koobka Isbaanishka
Inter Milan ayaa garaacday Juventus, Ronaldo
Kulamadii hore, waxay u noqon doontaa guul la hubo Manchester United, maadaama Aston Villa ay badisay kaliya mid ka mid ah 43-kii kulan ee ugu dambeeyay Premier League ay la ciyaartay Manchester United.
Laakiin Aston Villa ayaa heysata fursada ugu fiican sanadkaan. Kooxda Dean Smith waa awood aan muran ku jirin Premier League xilli ciyaareedkan, haddii ay guuleystaan ​​caawa, waxay u dhaqaaqi karaan kaalinta afaraad.
Manchester United waxaa ka maqan Edinson Cavani, kaasoo wajahaya ganaax seddex kulan ah ka dib markii lagu eedeeyay inuu cunsuriyad kula kacay akoonkiisa Instagram.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa sidoo kale go aansaday inuusan qatar galin qadka dhexe Victor Lindelof. Bailly wuxuu ka garab ciyaaraa Maguire qalbiga daafaca iyadoo Wan-Bissaka iyo Shaw ay kuwada ciyaarayaan buurta.
Fred, McTominayt iyo Pogba ayaa khadkooda dhexe ku soo bilaabay iyada oo Fernandes uu weerarka ka caawiyay Rashford iyo Martial.
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw, Fred, McTominay, Pogba, Fernandes, Rashford, Martial
Keyd: Henderson, Greenwood, Mata, James, Van de Beek, Tuanzebe, Telles, Matic
Aston Villa: Martinez, Lacag, Konsa, Mings, Targett, Luiz, McGinn, Grealish, Traore, El Ghazi, Watkins
Kaydka: Heaton, Taylor, Hourihane, Nakamba, Hause, Guilbert, Elmohamady, Davis, Ramsey
axadle 5779 posts
Niger: Conversation on the consequences of
Eddy Kapend, convicted of murder